တစ်ဦးကလယ်သမား, စာရေးဆရာနှင့်တီထွင်သူယသေရော tulle ဖို့တွန်းအားပေး, အင်္ဂလိပ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်နျဆာပကိန်းဂဏန်းခဲ့ အသက်အရွယ်အရွယ်လယ်ယာမြေအလေ့အထများတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်။
ကောင်းစွာ-to-လုပ်ပေးမိဘများထံသို့ 1674 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး tulle မိသားစုရဲ့ Oxfordshire အိမ်ခြံမြေအပေါ်ကြီးပြင်းလာတယ်။ အောက်စဖို့အတွက်စိန့်ဂျွန်ရဲ့ College မှဆုတ်ခွာပြီးနောက်သူဟာဥပဒေကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်လာရှေ့တော်၌ထိုပိုက်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုလေ့လာခဲ့ရှိရာလန်ဒန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
တစ်ဝတျလုံးတျောရရှေ့နေဥရောပကိုခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်နှင့်လက်ထပ်အဖြစ် 1699 ခုနှစ်, tulle အရည်အချင်းပြည့်မီ။
မိသားစုလယ်ယာရန်သူ၏သတို့သမီးနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့, tulle ပြည်မှအလုပ်လုပ်ရန်ဥပဒသောသူဖြစ်၏။ သူကဥရောပမြင်လယ်ယာမြေအလေ့အကျင့်အားဖြင့်မှုတ်သွင်း - pulverized မြေဆီလွှာကိုလှည့်ပတ်အညီအမျှလှပတဲ့အပင်တွေ-tulle အပါအဝင်အိမ်မှာစမ်းသပ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ယသေရော tulle ပိုမိုထိရောက်စွာစိုက်ပျိုးရန်လမ်းအဖြစ် 1701 ခုနှစ်တွင်အမြိုးအနှယျလေ့ကျင့်ခန်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ မိမိအတီထွင်မှုသည်မျိုးစေ့ကြဲမျိုးစပါးမတိုင်မီကမြေပေါ်မှာမျိုးစေ့ကိုကြဲအသုံးပြုပုံလက်ဖြင့်ပြုလေ၏။ များစွာသောမျိုးစေ့ကိုအမြစ်မယူခဲ့ပါဘူးကတည်းက tulle ဒီနည်းလမ်းကိုဖြုန်းတီးဆင်ခြင်၏။ ပထမဦးဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံအမျိုးအနွယ်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းတည်ဆောက်ခြင်း, tulle ဒေသခံတစ်ဦးအသင်းတော်များ၏ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုထံမှခြေလျင်ခြေနင်းနှင့်အတူ device ကိုတည်ဆောက်နေသည်, မိမိဂီတအသိပညာထည့်သွင်း။ အချောလေ့ကျင့်ခန်း, အစိတ်အပိုင်းများကိုရွေ့လျားနှင့်အတူပထမဦးဆုံးစိုက်ပျိုးရေးစက်, ယူနီဖောင်းအတန်းအတွက်မျိုးစပါးကွဲများနှင့်လည်းအစေ့ကိုတက်ဖုံးလွှမ်းကြ၏။
tulle ပိုပြီး "သဲ" အောင်သွား တီထွင်မှု စာသား။
မိမိအမြင်း-ရေးဆွဲပေါက်ပြားသို့မဟုတ်ပေါက်ပြား-ထိုးနှက် မြေဆီတက်တူး လည်းမလိုချင်တဲ့အမြစ်များကိုတက်ဆွဲနေချိန်မှာပိုပြီးအစိုဓာတ်နှင့်လေထုစက်ရုံအမြစ်များရောက်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့စိုက်ပျိုးခြင်း, ထိုသို့ loosing ။ ထို့အပြင်သူသည်မြေဆီလွှာတွင်ပင်လိုင်းများဖြတ်ဖို့ 4-Blade ထိုးနှက်တီထွင်ခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားတီထွင်မှုစမ်းသပ်မှုများနှင့် tulle ရဲ့လယ်ယာရှင်သန်စေခဲ့သည်။ 1731 ခုနှစ်, တီထွင်သူနှင့်လယ်သမားက "နယူးမြင်း Houghing မွေးမြူရေး။ : သို့မဟုတျ, လယ်လုပ်သောနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အခြေခံမူတခုတခုအပေါ်မှာစာစီစာကုံး" ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ သူ့စာအုပ်တချို့ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အတိုက်အခံနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာ, သူ့စိတ်ကူးများနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုထုတ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုး, tulle မှကျေးဇူးတင်စကား, သိပ္ပံအတွက်နည်းနည်းပိုပြီးအမြစ်တွယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
tulle ရဲ့မွဲအမွေ၏သေးအခြားသောနိမိတ်လက္ခဏာခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှရော့ခ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ယသေရော tulle ဒီစိုက်ပျိုးရေးတီထွင်ထံမှ၎င်း၏အမည်ကိုယူခဲ့ပါတယ်။
မိုနိုပိုလီ, မိုနိုပိုလီ - ချားလ်စ် Darrow
အဆိုပါ Can သမိုင်း - ထိုအခါအဆိုပါ Can ဖွင့်လှစ်
The Grand Trine ရှုထောင့်စံနမူနာ - ဆုကြေးဇူးကို?
ဿုံ Inelastic Collision
ကျောင်းသားဟောပြောမှုများအတွက်ထိပ်တန်း 15 စေ့ဆော် Quotes
မက္ကစီကိုစီးတီးရဲ့ Tlatelolco အသတ်ခံရမှု
အမေရိကန် Bandstand များ၏သမိုင်း
ပထမ Credit Card ကို
Michelin စမတ်ကြေးနန်း Jumper ကြိုးတွေပြန်လည်သုံးသပ်
မင်းသမီးဒိုင်ယာနာ မှစ. quotes
သူ၏ဝိညာဉ်ရေးခရီး မှစ. '' Siddhartha '' Quotes
တစ်ဦးအမြဲတမ်းဌာနေကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာဖို့ပြောင်းရွှေ့လာသောလူဗီဇာနံပါတ် Get လုပ်နည်း
တစ်ဦး ESL Class ကိုအတွက်စာဖတ်ခြင်းစာတတ်မြောက်ရေးအဘို့ဆက်စပ်အသုံးပြုခြင်း